Madaxweyne Deni oo ka hadlay arrimaha xasaasiga ah ee Somaliland, maqaamka Muqdisho iyo shirka Dhuusamareeb - Latest News Updates
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa markii ugu horeysay jeediyay khudbad aan caadi aheyn oo ku saabsan arrimaha Somaliland, maqaamka Muqdisho, shirarka Dhuusamareeb, Hobyo iyo wadahadallada lagu dhexdhexaadinayo dhinacyadii isku khilaafay doorashooyinka magaalada Kismaayo.
“Maqaamka Muqdisho in garowe looga hadlo waan soo dhoweynayaa, Muqdisho waa magaala madaxdii Soomaaliya, maqaamkeeda inuu dood ku jiro mar kasta aad bay noo dhibeysaa xaqiiqatan” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland oo soo jeediyay in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan in magaalada Garowe looga hadlo arrinta maqaamka Muqdisho.
Waxaa kale oo uu sheegay in maamulkiisu soo dhoweynayo arrimaha Somaliland, isagoona sheegay inuusan isagu u dhigeynin Soomaaliya iyo Somaliland taasi oo uu meesha ka saaray, wuxuuna hoosta ka xariiqay in khilaafka labada dhinac u dhaxeeya uu sababteeda leeyahay dastuurka dalka u yaala.
“Walaalaheen gobolada waqooyi jira ama maamulka Somaliland inay iyagana Garowe yimaadaan oo dooda ka qeyb gelaan oo doodahooda soo dhoweystaan” ayuu yiri Madaxweyne Deni oo ku booriyay dadka Puntland inaysan ka baqin doodaha iyo wadahadallada, isagoona tilmaamay in Somaliland ay soo dhoweynayaan haddii ay xujo fiican heystaan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo isla markaana taageersan yahay maamulkiisa shirarka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Hobyo, wuxuuna caddeeyay inuu isagu aad uga xun yahay dib u dhacyada iyo xaaladaha soo wajahay shirka Dhuusamareeb, hase yeeshee wuxuu sheegay in ahmiyadda la siiyo guulo laga gaaro shirarkaasi.
Dhinaca kale Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inuu taageerayo shirka Kismaayo uga furmay xiisadihii ka dhashay doorashada Axmed Madoobe iyo doorashooyinkii kale ee halkaasi ka dhacay, isagoona ku booriyay waxgaradka, aqoonyahanka iyo bulshada Jubaland inay dardar geliyaan sidii la isugu af garan lahaa hoggaanka maamulkaasi.